Mihazona ny mpiambina hifoha
"Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo amin'ny fahatoriana; fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika" — Rom. 13:11.
Ry anadahiko sy rahavaviko, tsy maintsy mitoetra ao amin'ny lapan'ny fo i Jesôsy, ary tsy maintsy maty ny izaho. Tsy maintsy vita batisan'ny Fanahy Masina isika, dia tsy ho tafatoetra tsy rototra isika hilaza hoe: "Tsy maintsy ho tonga izay ho avy; tsy maintsy tanteraka ny faminaniana." Mifohaza, miangavy anareo aho, mifohaza! Satria miantsoroka andraikitra masina indrindra ianareo. Amin'ny maha-mpitily anareo dia tokony hahita zana-tsipika manatona, ary hanome fampitandremana, mba tsy hitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana ny olona, fa hiala amin'izany raha mahalala ny fahamarinana.
Nanome fahazavana antsika ny Tompo mikasika ny zavatra hitranga ety an-tany, mba hitondrantsika fahazavana amin'ny hafa, ary hadinina isika raha mipetra-potsiny, tsy manao na inona na inona, na mandany fotoana amin'ny zavatra tsy misy fotony. Feno hevi-dravina ny sain'ny maro, ary nanda ny fahazavana nomen'ny Vavolombelona izy ireo, satria tsy mitovy amin'ny fomba fijeriny izany.
Tsy manery ny olona hanompo Azy Andriamanitra. Tsy maintsy manapa-kevitra ny fanahy tsirairay na hianjera eo ambonin'ilay Vatolampy ka ho torotoro izy na tsia. Talanjona ny lanitra mahita ny fitotonganana ara-panahy misy. Ilain'ny tsirairay ny hanokatra ny fony mirehareha ho an'ny Fanahin' Andriamanitra; ilainareo ny hanana fahaizana nohamasinina ho an'ny fanompoana an' Andriamanitra. Tsy maintsy mikasika anareo ny hery manova avy amin'Andriamanitra mba hanana ny sain'i Kristy ianareo.
Raha matory noho ny ody mampatory nomen'i Satana ny mpitily ka tsy mahay manavaka ny feon'ny Mpiandry tsara ary tsy miraika amin'ny fampitandremana, dia milaza aminareo aho noho ny fahatahorana an'Andriamanitra, fa hadinina aminy ny ran'ireo fanahy ireo. Tena tsy maintsy mifoha tsara ny mpitily, olona tsy rendremana eo amin'ny toeram-piambenana na andro na alina. Tsy maintsy mitsoka trompetra izy ireo mba hiala amin'ny fahotany ny olona ary hifidy ny tsara. Tsy fialan-tsiny ny tsy fahamatorana sy ny tsy firaihana. Manodidina antsika ireo onja be sy vato miafina hanapotipotika ny sambontsika ary ho rendrika izany raha tsy manao an'Andriamanitra ho fialofana sy famonjena ho antsika isika. - RH, 24 Desambra 1889.